လက်ကား KD-BC-8HN စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသော အရည်အသွေးမြင့် တာရှည်ခံ 17.3-လက်မ အိတ်ဆောင် ဒါရိုက်တာနှင့် အသံဖမ်း ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
Alibaba တွင် KD-BC-8HN ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
ဗီဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း။ 3G-SDI×8၊HDBaseT×4၊ HDMI×2
1. ဗီဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း- SDI×8၊ HDMI×2၊ HDBaseT×4၊ အထွက်- SDI×2၊ HDMI×2၊
2. Built-in 8-channel high-definition ရောစပ်ထားသော အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုဘူတာရုံ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအပြည့် အင်တာဖေ့စ် ရောစပ်ထည့်သွင်းထားသော အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုပြောင်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ထားသော ရုပ်ပုံ-ပုံ-ပုံ-ပုံမဆန်သော အနေအထား ဂျစ်စတစ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် ပြောင်းလဲခြင်း T-type တွန်းတံ၊4သဘောပေါက်ရန်၊ :4:4 အရှုံးမရှိခဲယဉ်းဖြတ်တောက်ခြင်း။
3. 4K ရောနှောထားသော kernel၊ 4K ဟာ့ဒ်ဝဲဆုံးရှုံးမှုမရှိသော ကူးပြောင်းခြင်း၊ ရာနှင့်ချီသော ဟာ့ဒ်ဝဲ အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကူးပြောင်းခြင်း။
4. အသံထည့်သွင်းခြင်း- စတီရီယို (ဘယ်၊ ညာ) IN×5;ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုက်ခရိုဖုန်း (48V) XLR IN×5;စတီရီယို (ဘယ်၊ ညာ) OUT×1;မျှတသောအထွက် XLR OUT×2;SDI မြှုပ်သွင်းထားသော အသံ IN×5၊ HDMI မြှုပ်သွင်းထားသော အသံ×2၊ HDBaseT ထည့်သွင်းထားသော အသံ×4၊ပင်မအထွက်မော်နီတာ Ф3.5×1;ပြန်ဖွင့်သည့် မော်နီတာ Ф3.5×1;ဒါရိုက်တာ MICФ3.5×2 ခေါ်ဆိုပါ။
5. Built-in ဒစ်ဂျစ်တယ် + အန်နာရောမွှေစက်၊ အသံထည့်သွင်းခြင်းနှင့် မြှုပ်သွင်းခြင်း ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ SDI×5၊ HDMI×2၊ HDBaseT×4၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထည့်သွင်းခြင်း/ထည့်သွင်းခြင်းရွေးချယ်ခြင်း ဟာ့ဒ်ဝဲတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့် အန်နာလိုအသံများ ရောနှောခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း။ switch ×5၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ ×5၊ analog စတီရီယို ×5၊ မိုက်ခရိုဖုန်း XLR×5 ကဲ့သို့သော ပြင်ပထည့်သွင်းအသံနှင့် ရောစပ်နိုင်သည်၊ ပြုပြင်ထားသောအသံအား HDMI၊ SDI အထွက်အဖြစ် မြှုပ်နှံနိုင်ပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် စတီရီယိုအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ အထွက်၊ တပ်ဆင်ထားသော 48V ဖန်တမ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ စတီရီယို×၁ အထွက်၊ ထုတ်လွှင့်မှုမော်နီတာ Ф3.5×1၊ ပြန်ဖွင့်သည့်မော်နီတာ Ф3.5×1၊ ဒါရိုက်တာနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နားကြပ် Ф3.5×1၊
6. Built-in ဟာ့ဒ်ဝဲအော်ဒီယိုနှောင့်နှေးမှု၊ ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်ပြောင်းကိရိယာနှစ်ခုမှတစ်ဆင့် အသံလုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခု၊ သွင်းသွင်းဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့် ထည့်သွင်းသည့် analog အသံတို့ကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဦးစွာသဘောပေါက်ပြီးနောက် အသံနှင့် ဗီဒီယို၏ တိကျသောထပ်တူကူးမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပါ။
7. ကင်မရာ PTZ ထိန်းချုပ်မှု၊ တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲ ဂျစ်စတစ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် Hall zoom ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ တွန်းရန်၊ ဆွဲထုတ်ရန်၊ လှည့်ရန်၊ စောင်းရန်နှင့် စောင်းရန် ကင်မရာ ၈ လုံးကို ထိန်းချုပ်ပါ။ကင်မရာရွေးချယ်မှုခလုတ် ၈ စုံ၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ဖြတ်လမ်းခလုတ် ၉ စုံနှင့် ကင်မရာများ မီနူး ဆက်တင်ဖြတ်လမ်းခလုတ်များ။
8. Built-in ဟာ့ဒ်ဝဲ 8-ချန်နယ်လမ်းညွှန်နှင့် ခေါ်ဆိုမှုစနစ် နှင့် 8-ချန်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် အချက်ပေးစနစ် TALLY;
9. အဆက်မပြတ်ဘောင်နှင့် အဆက်မပြတ်ကုဒ်များဖြင့် TS နှင့် MP4 ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့်မြင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် တပ်ဆင်ပါရှိ ဗီဒီယိုကုဒ်နှင့် ဝဘ်ကာတ်ကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ရန် တပ်ဆင်ထားသည့် ဟာ့ဒ်ဝဲ FMS ထုတ်ဝေခြင်းစနစ်၊
10. ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် အပိုင်းခွဲရိုက်ကူးမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် တပ်ဆင်-in ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုစနစ်။အသံဖမ်းဖိုင်သည် အဆက်မပြတ်ဘောင်နှင့် အဆက်မပြတ်ကုဒ်ပါရှိသော ထုတ်လွှင့်သည့် အဆင့် MP4 ဖိုင်ဖြစ်ပြီး SD ကတ်အပေါက်ကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
11. စက်ကိရိယာများ၏ ထုထည်နှင့် အလေးချိန်သည် ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်း လေယာဉ်တင်အိတ်ကို တင်ဆောင်သည့် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ယခင်- KD-BC-8H အပြည့်တင်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ပစ္စည်း ကြော်ငြာ အသံလွှင့်စက်
နောက်တစ်ခု: KD-BC-8L စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် အရည်အသွေးမြင့် တာရှည်ခံ 17.3-လက်မ အိတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့် အသံဖမ်းစက်